फागुन चार गते यसवर्षको पहिलो सूर्यग्रहण लाग्ने, सूर्य ग्रहणमा के के हुन्छ ? कहाँबाट देखिन्छ वा कुन कुन के फलिफाप हुन्छ ? – Yuvajagaran Nepal's Online Newspaper
फागुन चार गते यसवर्षको पहिलो सूर्यग्रहण लाग्ने, सूर्य ग्रहणमा के के हुन्छ ? कहाँबाट देखिन्छ वा कुन कुन के फलिफाप हुन्छ ?
ग्रहण शब्द सुन्ने वित्तिकै कुनै संकटको अभास दिने गर्दछ । कुनै अनिष्ठ हुन लागे झै लाग्दछ । खगोल शास्त्रीय घटनासँग वैज्ञानिक कारणसमेत जोडिएको छ सूर्य ग्रहणमा । यसमा ज्योतिषीय कारणले समेत असर पारेको हुन्छ । जसका अनुसार आध्यात्मिक घटनाको रुपमा लिएर चन्द्र ग्राहण तथा सूर्य ग्रहणले पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण प्राणीलाई यसले प्रभावित तुल्याउने गरेको छ । सन् २०१८ भित्र तीनवटा ग्रहण लाग्नेछन् ।
ग्रहण कहिले कहिले लाग्छ ? कहाँ कहाँबाट देखिन्छ ? यसबाट पर्ने नकारात्मक असरको समाधानका लागि के के सावधानी अपनाउन सकिन्छ ? यि सबैको जानकारी हुनु जरुरी छ । जस अन्तर्गत यसको असरबाट बच्न वा जीवन समृद्ध बनाउन सूर्य ग्रहणको समय आ–आफ्नो जन्मकुण्डली अनुसार ज्योतिषीय पद्दति पनि गर्न सकिन्छ ।
विज्ञानले जब पृथ्वी चन्द्रमा वा सूर्य एउटै सिधा रेखामा छन भने यस अवस्थामा चन्द्रमाले सूर्यलाई ढाकेर मध्यम प्रकाश दिँदादिँदै अध्यारो भयो भने त्यो नै ग्रहण मानिन्छ ।
पूर्ण सूर्य ग्रहण : पुरै अध्यारो भयो भने वा चन्द्रमाले सूर्यलाई पुरै ढाकेको अवस्थामा यसलाईपूर्ण सूर्यग्रहण भनिन्छ ।
खण्ड या आंशिक सूर्य ग्रहण : जब चन्द्रमाले सूर्यलाई पूरै ढाकेको छैन भने यस अवस्थाको ग्रहणलाई खण्ड ग्रहण भनिन्छ । पृथ्वीमा अधिकांश भागबाट खण्ड सूर्य ग्रहण नै देखिने गर्दछ ।
बलयाकार सूर्यग्रहण : सूर्यमा बलयाकार चाँद देखिएको खण्डमा अर्थात बीच भागमा ढाकिएर किनारमा प्रकाश दिएको छ भने यसलाई बलयाकार सूर्य ग्रहण भनिन्छ । सूर्य ग्रहण केही मिनेटको लागि मात्र देखिन्छ ।
२०१८ मा तीन पटक ग्रहण लाग्नेछ । १६ फरवरी पहिलो, १३ जुलाईमा दोस्रो र अगष्टमा लाग्ने यि तिनै ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण मानिनेछन् । यि ग्रहण प्रायः सबै देशबाट देखिने बताइएको छ । तर भारतबाट सूर्य ग्रहण नदेखिने भारतीय ज्योतिषहरुले बताइरहेका छन् ।
ग्रहणको समयमा घरमा जुठो पार्नु हुँदैन । यसको मतलब केही खानु हुँदैन । भगवानको आराधनामा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्दछ । पुजा, जप, जान, भजनकिर्तन आदि धार्मिक कार्य गर्नुपर्दछ । यसै समयमा नौ वटै ग्रहको पुजापाठ गर्दा अति लाभ मिल्नेछ ।
विद्यार्थीले राम्रो पढ्नु छ भने ग्रहण लाग्नु अगाडिदेखि सुरु गरेर लगातार ग्रहणभरि पढिरहनु राम्रो मानिन्छ । घरमा राखिएको पुजास्थललाई समेत कपडाले छोडेर राख्नुपर्दछ । घरमा कुनै खानेकुरा बाँकी रहेको छ भने त्यसमा तुलसी अथवा कुश हालेर राख्यो भने दोष नलाग्ने ज्योतिषहरु बताउँछन् ।
ज्योतिषका अनुसार ग्रहण सकिएपछि पुजा स्थललाई सफा गरेर जंगाजल छर्केर मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ । ग्रहदशाका अनुसार सूर्यग्रहण लाग्नु १२ घण्टा पहिलो देखि नै सुतक लाग्ने गर्दछ । यस कारण उक्त समयमा कोही नगर्नु । शुभ कामको लागि समेत यो समय अत्यन्तै हानिकारक हुने गर्दछ ।
यो सूर्य ग्रहण १४ फरवरी अर्र्थात् फागुन २ गते राति १२ बजेर २५ मिनेटबाट सुरु भई विहान ४ बजे समाप्त हुने उल्लेख छ । तर यो ग्रहण आंशिक भएकोले देखिनेछैन । यस समय मकर राशिबाट सूर्यले कुम्भ राशिमा आफ्नो स्थान बनाएपछि सूर्य ग्रहण लाग्ने गर्दछ । ग्रहणले सबै राशिलाई सकारात्मक या नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ । कुनै राशिलाई ग्रहणको प्रभाव राम्रो पर्छ भने कुनै राशिलाई यसको प्रभावले असर गर्दछ ।
लगभग १५ दिनको अन्तरालमा यो वर्ष २०१८ मा दोस्रो ग्रहण देखिदैछ । १६ फेब्रुअरी अर्थात् फागुन ४ गते यस वर्षको पहिलो सूर्यग्रहण लाग्नेछ । यो भन्दा पहिले गत महिना जनवरी ३१ मा पहिलो चन्द्रग्रहण लागेको थियो । सूर्यग्रहण दक्षिण जर्जिया, प्रशान्त महासागर, चिली, ब्राजिल र अन्टार्टिका आदि देशहरुबाट देखिनेछ । यस सूर्य ग्रहणको कारण १६ फेब्रुअरीपछि केही राशिहरुमा यसको नकारात्मक असर पर्नेछ भने केही राशिहरुको भाग्य चम्किने छ ।
बृष राशि – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus): कार्य क्षेत्रमा व्यस्तता बढ्नेछ । जसको कारण नोकरीमा सम्मान मिल्नेछ । व्यवसायमा विस्तार हुनेछ । आफ्नो बोलीमा नियन्त्रण राख्नुहोला । १६ फेब्रुअरीपछि वृष राशिका व्यक्तिहरुलाई धन कमाउने धेरै अवसरहरु मिल्नेछ ।
मिथुन राशि – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini): पारिवारिक विवादबाट टाढै रहनुहोला । विरोधीहरु शान्त रहनेछन । व्यावसायिक लाभ सामान्य हुनेछ । स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहनेछ । तथापि केही समस्याहरु आगामी दिनहरुमा आउन सक्छ ।
कर्कट राशि – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer): कर्कट राशि भएकाहरुलाई १६ फेब्रुअरीपछि शुभ समाचार मिल्नेछ । भविस्यमा उन्नतिको अवसरहरु पाउनुहुनेछ । व्यवसायमा धन लाभ वृद्धि हुनेछ। साथीभाईहरुसँग भेटघाटको अवसर मिल्न सक्छ, जसको कारण नयाँ परियोजनाहरु अगाडी बढाउँने सम्भावना हुनेछ ।
सिंह राशि- मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo): भू-सम्पतिसम्बन्धी रोकेका कामहरु पूरा हुनेछ । व्ययमा नियन्त्रण राख्नुहोला । स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै रहनेछ । कानूनी विवादमा संलग्न हुन् सक्छ । १६ फेब्रुअरी पछि कुनै प्रकारका दूर्घटना हुन् सक्छ, त्यसैले सावधान रहनुहोला।
कन्या राशि – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo): कन्या राशि हुनेहरुका लागि यो ग्रहणको समय अनूकुल रहनेछ । कार्य क्षेत्रमा विस्तार हुने सम्भावना छ । कहीं रोकेका पैसा प्राप्त हुनेछ । घरको पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ । विदेशको यात्रा गर्न सक्ने योग छ।
तुला राशि- र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra): ग्रहण पछि तुला राशि व्यक्तिहरुको मन विचलित हुन् सक्छ। मानसिक तनाव बढ्न सक्छ। पैसाको मामलामा हानि नोक्सानी हुन् सक्छ। सावधान रहनुहोला।
बृश्चिक राशि- तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio): मन अशान्त रहनेछ। कानूनी झन्झटबाट मुक्ति मिल्नेछ। व्यापार-व्यवसायमा सुधार हुनेछ। धर्ममा श्रद्धा बढ्नेछ।
धनु राशि- ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius): तपाईको दिन प्रतिकूल रहनेछ। अपरिचित व्यक्तिहरुबाट सतर्क रहनुहोला। व्यवसायिक निर्णयहरु ध्यानपूर्वक सोचेर लिनुहोला। घरमा शान्ति हुनेछ।
मकर राशि- भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn): कार्य क्षेत्रमा नयाँ पदभार मिल्न सक्छ। भू-सम्पतिबाट लाभका अवसरहरु उपलब्ध हुनेछ। व्यावसायिक लाभमा वृद्धि हुनेछ।
कुम्भ राशि- गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius): भोग विलासका साधनहरुमा खर्च बढी हुनेछ। नोकरीमा मन जानेछ। व्यवसायमा धन लाभ हुनेछ। धैर्य गर्नुहोला।
मीन राशि- दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces): उत्साहमा वृद्धि हुनेछ। काममा उन्नति गर्ने अवसर मिल्नेछ। व्यवसायमा लाभ हुनेछ। सन्तानको भविष्यप्रति चिन्ता बढ्नेछ।
पहिलो लटका स्मार्ट कार्ड (लाइसेन्स) पनि गुणस्तरहिन
एमाले–माओवादी केन्द्रको एकताले सिंगो ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ को जन्म, औपचारिक घोषणा मात्रै बाँकी